Aduu Jalqaba and Aduu Xumura gatiiwwaan aduu lamaaniiti.
Hundeen tarree dirqaalootni keessaa filatamanif aakkaataa waggaan itti shallagamuu agarsiisa.
Akkaata mala (NASD),Tokko tokkoon ji'oota 12 guyyoota 30
Lakkoofsa sirri guyyoota ji'aa keessa,Lakkoofsa sirri guyyoota waggaa keessaa
Lakkoofsa sirri guyyoota ji'aa keessa,waggaan guyyoota 360 of keessaa qaba.
Lakkoofsa sirri guyyoota ji'aa keessa,waggaan guyyoota 365 of keessaa qaba.
Mala Awurooppaan,tokkoo tokkoon ji'aa 12 guyyoota 30
Hammi entaa bara 2008 baroota 2008-01-01 fi 2008-07-01 jidduu jiru meeqa?